Booqashooyinka bulshada waxay ansaxinayaan awooda iskaashiga - Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Booqashooyinka bulshada waxay ansaxiyaan awooda iskaashiga
Booqashooyinka bulshada waxay ansaxiyaan awooda iskaashiga
Xilliga Xagaaga ayaa ku habboon in loo baxo wadada si loo hubiyo la-hawlgalayaasha badan ee ka caawiya Ganacsiga inay fuliyaan himiladeenna xoojinta bulshada. Waxba kama helo wax ka badan sida tooska ah ee aan uga barto shakhsiyaadka iyo ururada gobolka oo dhan sida aan wax u qabanno iyo sida aan ugu sii fiicnaan karno hagaajinta nolosha dadka aan u adeegno.
Waxaa jira waxyaabo badan oo muhiim ah oo looga hadlayo cusboonaysiintaan kooban - wali waxaan haystaa dhowr joogsi oo jadwalkayga ah "safarka wadada" ka hor dhicitaanka - laakiin waxaan la wadaagi doonaa dhawr halkan si aan u siiyo dareen ku saabsan waxyaabaha ugu waawayn ee ka dhacaya gees walba Washington.
Iyadoo ay weheliso Gudiga Haweenka Gobolka Washington Regina Malveaux
Waxaan fursad u helay inaan la hadlo lana kulmo xubnaha iyo taageerayaasha Guddiga Haweenka Gobolka Washington, oo ay kujiraan gudoomiye Regina Malveaux, oo ah agaasimaha fulinta ee YWCA Spokane, kulanka WSWC iyo munaasibada wacyigalinta oo ay iskaashatay jaamacada Gonzaga. Sababo dhaqaale, bulsho, iyo taariikheed awgood, tiro aan dheellitirnayn oo dumar ah ayaa isu arka inay ku liitaan ama laga go'doomiyey faa'iidooyinka fursadaha loo siman yahay. Guddigan waxaa la aasaasey 2018 si ay u siiso xarun dowladeed wax ka qabashada arrimaha haweenka, iyada oo la ogyahay in hagaajinta ladnaanta haweenka ay saameyn togan ku yeelan doonto arrimaha ballaaran ee bulshada. Waxaan kugu dhiiri gelinayaa inaad wax dheeri ah baro oo la hawlgala ajandaha iyo shaqada ee WSWC.
Wadashaqeyn si loo joojiyo hoy la'aanta
Guriga Yard Cottages ee kuyaala magaalada Spokane, mashruuc joogto ah oo guriyayn taageero ah oo ay caawinayaan Sanduuqa Guryaha ee Gobolka
waxaan booqday Guryaha Yard Guri gudaha Spokane, oo ah mashruuc taageero joogto ah oo guriyeyn ah oo loogu adeego dadka dakhligoodu hooseeyo, kuwa naafada ah oo horey u ahaan jiray hoylaawe ay ku jiraan haweenka iyo carruurta. Kuweena Sanduuqa Amaanada Guryaha ayaa gacan ka gaysatay maalgelinta 24-ka guri - 15 ka mid ah waa net-eber, oo lagu dhammaystiray baalayaasha ku shaqeeya cadceedda. Waxay ku dhisan yihiin laba hektar oo mar loo adeegsaday xaruntii carruurta agoonta ee Spokane oo loo yaqaan "daaradda guriga." Albaabka ku xiga waa a Xarunta Nolosha Kala-guurka, Bixinta maareynta kiisaska iyo adeegyada ay ka mid yihiin tababarka shaqada ee agagaarka Café New Leaf Bakery Café iyo meheradda meheradda (Caleenta cusub waxay qabatay dhacdadii Guddiga Haweenka ee Gobolka Washington ee Spokane!) , federaaliga, kuwa aan macaash doonka ahayn iyo kuwa kale ee la shaqeeya si ay uga caawiyaan joojinta hoy la'aanta Washington.
Dhul Gogosha loogu talagalay Hobson Place ee Gobolka King
Mid kale ayaa halkan lagu arkaa isagoo dhulka dhigaya Hobson Meel, 85 cutub oo guryo la awoodi karo ah oo kuyaala King County oo loogu talagalay dadka qaba baahiyaha gaarka ah iyo cudurada maskaxda. Ganacsigu wuxuu gudoonsiiyay deeq lacageed $ 300,000 si looga caawiyo dhismaha.
Akhri wax ku saabsan mashaariicda kale ee waaweyn iyo wada-hawlgalayaasha guryeynta ee ku dhacaya heerarka xagaagan, oo ay ku jiraan Guriyeynta Compass gudaha Everett, iyo Mercy Magnuson Meel Seattle.
Wadashaqeynta xoojinta dhaqaalaha gobolka
Maamulaha Carbitex Ron Bonninger wuxuu sharxayaa waxqabadkooda waxqabadka sare ee kaarboon kaarboon inta lagu gudajiro doodaha ku saabsan awooda gobolka Tri-Cities ee qalabka sayniska iyo soosaarka horumarsan.
Cusbooneysiinta tikniyoolajiyadda ayaa horseed u ah kobaca cajiibka ah ee qaybaha kala duwan ee warshadaha ee Washington. In kasta oo laga yaabo inaad ka fikirto gobolka Puget Sound markaad maqasho "tiknoolajiyad," adduunku aad buu uga ballaaran yahay magacyada qoysaska ku meeraysta Greater Seattle. Safarkeennii ugu dambeeyay ee bariga Cascades wuxuu dib noogu xaqiijiyey in Tri-Cities ay tahay goob kulmisa fursadaha ka soo baxa hoggaaminta sayniska iyo injineernimada. Carbitex, tusaale ahaan, waxay kordhineysaa xoogga, adkeysiga iyo faa'iidooyinka miisaanka fudud ee kaarboonka leh sifooyin jilicsan oo beddelaya kabaha waxqabadka sare, moodada iyo qalabka safarka. Maamulaha guud Ron Bonninger wuxuu oggol yahay in sahaminta tababarrada iyo iskaashiga tacliinta sare si loo abuuro barkad adag oo shaqaalaha teknolojiyada maxalliga ah leh xirfado lagu dabaqi karo soo saarista agabyada horumarsan iyo sayniska qalabka ayaa ah hal dariiqo oo aan halkan uga taageeri karno kor u kaca dhaqaalaha teknolojiyadda gobolka.
Sheybaarka Qaranka ee Waqooyi-Galbeed ee Baasifiga (PNNL) waa hogaamiyaha cilmi baarista iyo horumarinta tikniyoolajiyadda tamarta nadiifka ah. Dr. Jud Virden, oo ah agaasimaha sheybaarka Associate ee Tamarta iyo Agaasinka Deegaanka, ayaa na casriyeysay teknoolojiyadda batteriga ee horumarsan ee laga soo saaray PNNL, iyada oo ay ugu mahad celineyso qeyb ka mid ah deeqda Sanduuqa Washington ee Tamarta Tamarta. Baytariyada iyo keydinta tamarta ayaa lagama maarmaan u ah horumarinta nadiifiyaha, adkeysi badan iyo shabakad koronto oo lagu kalsoonaan karo oo awood u siin doonta mustaqbal kaarboon-yar.
Baytariyada iyo teknolojiyadda keydinta tamarta ee lagu horumariyo PNNL, oo ​​uu hoggaamiyo Dr. Jud Virden, waxay muhiim u yihiin nadiifinta, adkeysi badan iyo shabakadda korantada ee la isku halleyn karo oo awood u siin doonta mustaqbalka dhaqaalaha kaarboon-hooseeya.
Marka lagu daro cilmi baarista tikniyoolajiyadda tamarta nadiifka ah, saynisyahannada PNNL toddobaadkan waxay tooshka ugu hayaan shaqadooda hor-u-marinta ee soo saarista tamarta hooseysa ee biraha cusub ee miisaanka culus - mashruuc kale oo ah Sanduuqa Nadiifinta Tamarta! Qalabaynta Gargaarka iyo Fidinta (ShAPE ™) waa qalab cusub iyo habka wax soo saarka oo bixiya waxyaabo aan caadi ahayn iyo isticmaalka tamarta oo yaraaday. Marka loo eego miisaanka warshadaha, ShAPE ™ wuxuu leeyahay awood uu ku sameeyo gawaarida iyo diyaaraduhu inay noqdaan kuwo shidaal badan oo aad u xoog badan.
Had iyo jeer waa maskax-jab in la arko horumarka tikniyoolajiyadda ee injineerada Washington iyo saynisyahannadu sii wadaan inay dunida ku soo kordhiyaan.
Lamb Weston's Mark Schuster, silsiladda sahayda caalamiga ah ee VP, waxay tilmaamaysaa Xarunta Innovation LW ka hor intaanan booqan howlahooda baradhada ee aadka u casriyeysan, oo ah kan ugu weyn uguna fiican adduunka
Isagoo ka hadlaya maskax-wareer, booqashadeenna si Lamb Weston HQ ee Richland waxay muujisay saameynta tikniyoolajiyadda ee beeraha iyo ka shaqeynta cuntada. Markay arkeen xaruntooda ugu weyn ee Innovation Center isla markaana ay indha indhayn ku sameysay dhismaha cusub ee shirkadda waddada dhinaceeda oo dhan, Mark Schuster, oo ah madaxweyne ku xigeenka silsiladda saadka ee caalamiga ah, wuxuu na siiyay booqasho ay ku soo bandhigeen qaab-casri ah howlaha baradhada - kan ugu weyn uguna wanaagsan adduunka. Qiyaastii 5 milyan oo rodol oo baradho-koray Washington ah ayaa halkan lagu farsameeyaa maalin kasta suuqyada adduunka. Balaadhinta Lamb Weston halkan waxaa lagu dhiirigaliyay iyadoo laga taageerayo sanduuqa keydka istiraatiijiyadeed ee horumarinta dhaqaalaha.
Caqabadaha hortaagan dhoofiyaasha waaweyn ee aan kala hadalnay Shuster iyo kooxdiisaba waxaa ka mid ah siyaasada ganacsiga ee federaalka oo kacsan iyo canshuuraha, iyo dhibaatada ciriiriga gaadiidka ee hareeraha dekedaheena.
NoaNet waxay ballaarinaysaa marin-u-helka iyo tayada ballaadhinta, oo fure u ah dhisidda dhaqaale-goboleedyo adag oo leh fursado loo siman yahay bulshada ku nool miyiga.
Fure u ah dhisidda dhaqaale goboleed adag iyo fursado horumarineed oo laga helo bulshooyinka miyiga ku nool waa sinnaan dijitaal ah - oo la isku halleyn karo, oo internet xawaare sare leh lagu wada heli karo.
Cindy Zehnder, madaxweyne ku xigeenka, Gordon Thomas Honeywell, ayaa diyaariyey booqasho Xarunta Hawlgalka Shabakadda ee NoaNet gudaha Spokane. Waxaan helnay faahfaahin faahfaahsan oo ku saabsan ballaarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee ballaadhan oo awood u leh iyada oo la marayo marinka biilka ballaadhinta Miyiga.
Waxbadan ka baro websaydhkooda: https://noanet.net/.
guryo la awoodi karosanduuqa tamarta nadiifka ahhorumarinta dhaqaalahaHoy la’aanGanacsiga caalamiga ahLisa Browncilmi baarista iyo horumarkabulshooyinka reer miyiga ahXoojinta bulshada
← Dhaqaalaha gobolka, iskaashiga tooska ah ee WEDA Tartamayaasha guuleysta ee loogu talagalay Adeegyada Dhibbanayaasha iyo Kuwa Ka Badbaaday: Hindisaha Maalgelinta ee Wax Ka Qabashada Adeegga Dhibbanayaasha Aan La Gaadhin Ayaa U Baahan Maalgelinta Deeq →